I-NCS ye-NCS kubantu abatsha kunye nabazali / abagcini - i-Element Society
Ndingafumana phi uluhlu lokupakisha?
Kuza kuphi na inkqubo yam?
Ngaba ndingayibhalisela i-NCS kunye nabahlobo bam?
Ngaba iifowuni zivunyelwe kwi-NCS?
Ngaba abantu abatsha kufuneka bazise isikhwama sokulala?
Ziziphi ukutya okunikezwayo?
Uluhlu lokupakisha lufakwe kwiNkcazo yeCSS yeHlabathi / yeAkwindla esiyithumelayo kubantu abatsha kunye nabazali / abagcini babo abaneendawo eziqinisekisiweyo *. Sithumela oku malunga nenyanga enye ngaphambi kokuqala kwenkqubo.
Ukuba awufumananga yakho i-NCS yeHlabathi yeHlabathi / iAntumn Guide okwangoku, unqakraza kwikhonkco elingezantsi ukuze ubone inguqulo ye-intanethi equka uluhlu lokupakisha.
I-NCS Summer 2017 Guide
Uvumelekile ukuba ulethe isitikithi enye kunye nebhegi enye ngosuku. Naliphi na iifowuni ezongezelelweyo kufuneka zishiywe ngasemva, ngoko ke nceda uhlale ngaphakathi komda wemithwalo. Nceda uzame ukugwema ukusebenzisa i-suitcase enkulu ngenxa yendawo yokugcina imithwalo.
Ulutsha alufanelekanga ukuzisa izinto ezinqatshelwe njengotywala, naziphi na iziyobisi ezingekho mthethweni, izinto ezingekho mthethweni, iipenknives okanye izixhobo kwi-NCS. Siyacela abantu abaselula ukuba bawuhloniphe le mithetho njengoko kuya kuba nemiphumo xa kufunyaniswa ukuba unayo nayiphi na yalezi zinto.
Nceda uqaphele ukuba asikwazi ukuqinisekisa izinto eziyimpahla. Ngenxa yesi sizathu, sincoma ukuba ungenzi izinto ezingabizi okanye izinto ezixabisekileyo.
Inkqubo nganye ye-NCS yenziwa kwi-UK.
Kwiminyaka edlulileyo, abantu abatsha baye bafika kwiindawo ezifana neSkotland, iCumbria, iKent kunye neWales kwiSigaba 1 kwenkqubo.
Izigaba ze-2 kunye ne-3 zihlala zihlala kufuphi nommandla wendawo omncinci, ngokuqhelekileyo ekuhambeni ukuhamba ukusuka ekhaya okanye kwisikolo, kodwa oku kuyahluka kwaye abantu abatsha banokuvela ekhaya.
Siza kuthumela iithayimthebhile ngolwazi oluthe ngqo malunga neendawo ngqo malunga nenyanga enye ngaphambi komhla wokuqala kwenkqubo nganye xa zonke iindawo ziqinisekisiwe.
Abathathi-nxaxheba baya kufuna ukuhamba kwindawo yokuhlangana edlalwa ngaphakathi okanye kufuphi nabo. Emva koko siza kulungiswa ukuhamba ukuze kuthathe abantu abatsha kwiindawo ezikude. Abantu abaselula kunye nabazali babo okanye abagcini bajongene nokulungelelanisa uhambo lwabo ukuya kwiingongoma zendibano kunye nakwiindawo zokubuyisa ngexesha eliboniswe kwixesha eliyimthebhile.
Abantu abaselula bangabhalisa kunye nabahlobo, kwaye ukuba bafaka isicelo somhla omnye kwindawo efanayo kwaye bakhethe ubuchule obufanayo beSigaba se-2, banethuba elihle lokufumana inkqubo efanayo. Emva kokuba besayine, ababantu abaselula banokuqhagamshelana nathi ukuba bafumane inkqubo efanayo okanye bahlanganyele kwigumbi. Siya kufuna ukwazi amagama omhlobo ngamnye kwaye siza kwenza okusemandleni ethu ukuba sithathe le nto ingqalelo. Nangona singenakuqinisekisa ukuba oku, ukubhalisa kwangethuba kuya kwandisa amathuba abo!
I-NCS yindlela enkulu yokuhlangabezana nabantu abatsha kwaye wenze abahlobo abatsha! Hlola ividiyo yethu apha.
Abantu abaninzi abaselula bafumanisa ukuba nangona bebekwe kwiqela elithile okanye utshintsho kubahlobo babo, le nkqubo inika imali yokuhlangana nabantu abatsha ngokusebenzisa imisebenzi yokwakha iqela kunye nokuba umcebisi wabo omdala ngumntu omdala oncike xa engaqinisekanga. Sivumela kuphela inani elithile labantu abatsha ukusuka kwiprogram nganye kwiprogram nganye, kwaye ngoko ke inkqubo iya kuba yintlahlela yokuqala abantu abaninzi abaselula. Kuyo yonke inkqubo, kwaye ngokukodwa ekuqaleni, kuya kuba nemidlalo emininzi kunye neebhola zokuqhaqhaqhaqhaqha ukuqinisekisa ukuba wonke umntu uyazi abanye abantu abaselula kwiqela labo.
Ukongezelela, abaninzi abantu abaselula bathi enye yezona ndawo zibalaseleyo zenkqubo ye-NCS yadibana nabantu abaninzi abatsha kunye nabahlobo abatsha. Cofa apha ukuze ubone ezinye zeentlanganiso zamatriki zangaphambili. Asikwazi ukubonelela ngolwazi malunga neliphi iqela elutsha eliza kubelwa kulo, njengoko amaqela kwiprogram nganye ayabelwe kuphela iintsuku ezimbalwa ngaphambi komhla wokuqalisa kwenkqubo. Abantu abaselula bayakufumana ukuba yeyiphi iqela abahlala kuyo ngosuku lokuqala lwenkqubo.
Nceda uqaphele ukuba indawo yokuhlala kwi-NCS yinto yesini esisodwa kwaye ngoko asikwazi ukuvumela izicelo zokwabelana ngesithuba kubantu abancinci abaselula.
Ngaba iifowuni zivunyelwe kwinkqubo ye-NCS?
Abantu abaselula bayavunyelwa ukuzisa iifowuni zabo (kunye neeshaja) kunye neprogram ye-NCS kwaye baya kukwazi ukuyisebenzisa xa imisebenzi ingenziwanga (ukusebenzisa iifowuni zesoxa ngexesha lokusebenza alivumelekanga). Nceda uqaphele ukuba akubikho ukufumana iifowuni rhoqo, ngokukodwa kwiSigaba 1 esivame ukusekwa kwiindawo ezisemaphandleni.
Zonke indawo zethu zokuhlala ziza kunye nezixhobo eziyimfuneko, ezifana nokufikelela kwizibane zamandla, imvula, njl. Kungakhathaliseki ukuba luhlobo lwendawo yokuhlala kwiprogram ethile, abathathi-nxaxheba baya kuba nokufikelela kwizisekelo zamandla kwaye kufuneka babe nako ukuhlawula iifowuni zabo. Ukufikelela kufumaneke kakhulu kwindawo yokuhlala.
Nceda uqaphele ukuba asinakukwazi ukuqinisekisa izinto ezisemgangathweni ukuze abantu abancinci abathwele iifowuni zabo eziphathekayo benze njalo kwingozi yabo.
Hayi, abantu abaselula abakudingi ukuzisa isikhwama sokulala. Yonke indawo yethu yokuhlala ihamba neendawo zokulala, kubandakanywa indawo yokuhlala kunye neeyurts. Siphinde sibonelele ngebhedlele kwinkampu yobusuku bonke abantu abatsha abachaphazelekayo kwiNgxenye 1.
Zonke ukutya neziphuzo ziya kunikwa ngexesha leendawo zokuhlala (xa abantu abaselula behlala kude nekhaya). Udinga kuphela ukuzisa isidlo sasemini ngosuku lokuqala lweSigaba 1 (kunye neSigaba 2 kuxhomekeke kwiinkqubo, nceda ukhangele ixesha lakho lokubhala).
Ngethuba nje saziswa malunga neemfuno zomntu osemncinci kusengaphambili, sinokubonelela ngokutya okukhethekileyo kwiimfuno zokutya, kuquka i-halal, i-kosher, i-vegetarian, i-vegan, ne-gluten-free food, kunye nokutya okuhlukahlukeneyo kokutya. Nazi izibonelo zokutya ezikhoyo ngexesha leendawo zokuhlala. Izinketho ziyahluka:
Isigaba 1 (indawo yokuhlala):
Nceda ulethe isidlo sasemini ngosuku oluqala. Ukutya okuphakamileyo kwamandla kunikezelwa yikhungo esisebenza ngaphandle.
Ukutya kwasekuseni: ukutya okutya okuphekiweyo, iphariji
Ukutya: ama-sandwiches, crisps, iziqhamo
Ukutya okudliwayo (isib. I-pasta, i-pizza, i-curry, i-chilli), isaladi, i-dessert
Hlola ixesha lakho lokubhala ukuze ubone ukuba ufuna ukuzisa isidlo sasemini ngosuku oluqala. Ukutya ke kunikezelwa nguMngeni kwaye abantu abaselula baya kuzipheka ngokwabo njengenxalenye yokuzimela kwabo abazimeleyo.
Isidlo sakusasa: i-cereal, i-toast
Ukutya okudliwayo: ukukhethwa kwezidlo ezitshisayo kunye nokupheka njengeqela (umz. I-sausages kunye namazambane ahlambulukileyo, i-fry-fry, i-pizza)
Isigaba se-3 (engekho yokuhlala)
Nceda ulethe ikhefu lakho lokutya. Ukutya akunikezelwa.
Izigaba ze-2 kunye ne-3 (iintsuku zomsebenzi, ukuhlala ekhaya ebusuku)
Baya kulala phi abantu abaselula ngexesha lokuhlala?
Kwenzeka ntoni kwiLwazi lokuhlwa?
Kubiza kangakanani ukuba uthathe inxaxheba kwi-NCS?
Ngaba abanye abatsha abaya kwiprogram banenkinga yokuziphatha?
Ngubani oza kuba noxanduva lwabantu abaselula emhlabeni?
Ngaba kuya kuthatha inxaxheba kwi-NCS ukuphazamisa izifundo zam eselula?
Ndiyifumana njani intombazana yam?
Baya kulala phi abantu abaselula ngexesha leendawo zokuhlala?
Kukho uluhlu lweendawo zokuhlala ezikhoyo ngexesha le-NCS (umzekelo, amagumbi okulala ahlukeneyo, iintente, i-yurts, njalo njalo), kwaye indawo yokuhlala ethile iyahlukahluka kwinkqubo. Iinkcukacha zokuhlala kunye neendawo nganye kwinkqubo ziya kuthunyelwa kubathathi-nxaxheba malunga nenyanga enye ngaphambi komhla wokuqalisa kwenkqubo.
Indawo yokuhlala igcinwe yikhungo esisebenza ngaphandle, i-campus okanye enye indawo yokubonelela indawo yokuhlala kwaye kukho izinto zokukhusela ezikhoyo apho ukugcina abahlali bayo bekhuselekile kunokwenzeka. Abathathi-nxaxheba abesilisa nabafazi bahlukana kwiindawo zokulala zesini kunye kwaye abavunyelwe ukungena kwamagumbi abo.
Indawo yokuhlala ihamba nezixhobo eziyimfuneko ezifana nokufikelela kwizibane kunye neziseko zamandla. Ezinye indawo zokuhlala, ezibandakanya iindawo zokuhlambela, zingabelana nabanye abantu abatsha kodwa kuya kuba kunye nabathathi-nxaxheba besini esifanayo.
Nangona akukho xesha elimiselweyo lokuba abantu abaselula bafune ukulala, bonke abantu abaselula kufuneka babe kwindawo yabo yokuhlala yi-10.45pm. Sincoma ukuba abantu abancinci bafumane ubuthongo obuhle bokuqinisekisa ukuba bayakujabulela ngokupheleleyo imisebenzi yeentsuku ezilandelayo!
Iinkqubo eziqala ngeeholide zasehlotyeni:
Ngexesha leSigaba 1, abantu abaselula bahlala kwindawo yokusebenza yangaphandle kwiindawo ezisemaphandleni. Uhlobo lokuhlala luyahlukahluka. Kungaba ngamaborori, ngohambo lokuhamba kwenkampu ngobusuku bonke, kodwa nokuba neentente okanye i-yurts. Iinkcukacha nganye kwinkqubo ziya kuthunyelwa kubathathi-nxaxheba malunga nenyanga enye ngaphambi komhla wokuqalisa.
Ngexesha leSigaba 2, abantu abatsha baya kuphila ngokuzimeleyo ngokuhlala kude nokupheka ukutya kwabo. Kwakhona, amalungiselelo okuhlala angahluka (umzekelo, unokuba yindawo yokuhlala yokuhlala kwipyunivesiti okanye iintente okanye i-yurts), kunye neenkcukacha nganye kwinkqubo ziya kuthunyelwa kubabathathi-nxaxheba malunga nenyanga enye ngaphambi komhla wokuqalisa kwenkqubo. Ngexesha leSigaba 3, abantu abaselula baya kuhlala ekhaya ebusuku.
Kwiiprogram eziqala ngexesha lekota:
Ngethuba leSigaba 1, abantu abatsha baya kuhlala kwiziko lokusebenzela ngaphandle kwimihlaba. Uhlobo lokuhlala luyahlukahluka. Kungaba ngamaborori, ngohambo lokuhamba kwenkampu, okanye i-yurts (iintente ezijikelezayo), okanye indawo yokuhlala. Iinkcukacha nganye kwinkqubo ziya kuthunyelwa kubathathi-nxaxheba malunga nenyanga enye ngaphambi komhla wokuqalisa. Zonke izixhobo eziyimfuneko, ezinjengeemvula kunye neziseko zamandla, ziya kufumaneka. Ngethuba leminye yeprogram (iSigaba 2 kunye ne-3), abantu abaselula baya kuhlala ekhaya ebusuku.
ULwazi lokuhlwa luyithuba lokuba abathathi-nxaxheba nabazali okanye abagcini bafumane ulwazi oluninzi malunga ne-NCS kwaye babuze nayiphi na imibuzo abanokuyenza malunga nenkqubo. Kwakhona nethuba lokuba bahlangabezane nabanye abatsha abaya kuthatha inxaxheba kwinkqubo efanayo, kunye nabazali okanye abagcini babo.
Sizakukuthumela isimemo soLwazi lwangokuhlwa xa indawo iya kuqinisekiswa. Ngokuqhelekileyo kubanjwe iiveki ze-2 ngaphambi kokuba inkqubo iqale. Sincoma ukuba uhambe njengabathathi-nxaxheba bangaphambili bawufumene luncedo kakhulu, akunyanzelekanga ukuba kunjalo. Kukho nawuphi na, siya kukuthumela isicatshulwa esicacisiweyo seHlabathi / seAkwindla malunga nenyanga enye ngaphambi komhla wokuqala weprogram nge-imeyli okanye ngeposi, ngokuqhelekileyo kuxhomekeka kwintetho ekhethiweyo kwisicelo.
Siyakholwa ukuba bonke abaneminyaka eyi-15-17 abanamalungelo afanelekile ukuba bathathe inxaxheba kwi-NCS kwaye lixabiso elikhulu ngemali. Urhulumente ubeka imali engaphezu kwe-£ 1,000 ngamnye ngenxaxheba ukuze siqinisekise ukuba inkqubo ayixabanga ngaphezu kwe-£ 50 yemali yokulawula, nokuba uyayisebenzisa nge-NCS Inselele okanye kwi-NCS Trust. Abathathi-nxaxheba bachitha ixesha elide ukusuka ekhaya kunye nayo yonke imisebenzi ehlanganisiweyo. Oku kuquka ukuhlala, ukutya (xa kwisigaba sokuhlala) nezixhobo.
Sivame ukubonelela ngezibonelelo ezizodwa zezikolo esiya kutyelela. Ukuba unemibuzo malunga nokuncediswa kwemali okanye intlawulo sicela uqhagamshelane nathi.
Umngeni ujolise ukuxhasa abo baneempembelelo zokuzivumela ukuba bathathe inxaxheba baze bafumane okulungileyo kwi-NCS.
Njengoko ukhuseleko lwethu luyinkxalabo enkulu, sihlolisisa isicelo ngasinye somntu osemtsha, ngokukodwa ukunyamekela ingcaciso yonyango kunye nenkxaso enikezelweyo.
Ukuba sitsheliwe ukuba umntu omncinci unzima ukulandela imithetho ecacileyo nemida, siya kuqhagamshelana nomzali okanye umgcini ukuxoxa ngale nto. Kwezinye iimeko siya kuqhagamshelana nezikolo, ootitshala okanye ezinye iingcali ukuze uthole ulwazi olungakumbi. Sifika kwisigqibo malunga nomntu omncinci kunye nenkxaso engakanani abayidingayo kwi-NCS. Ukuba kuyimfuneko, siza kufaka inkxaso yabasebenzi abongezelelweyo endaweni yomntu omncinci.
Kuzo zonke iimeko, siza kwenza abasebenzi abachaphazelekayo baqonde nayiphi na imingeni yokuziphatha ukuze bakwazi ukuxhasa umntu omncinci, kunye neqela lonke. Sinekhowudi yokuziphatha. Sichaza oku kubantu abatsha ekuqaleni kwenkqubo kwaye silindele ukuba balandele. Ikhowudi yokuziphatha iqulethe imigaqo malunga nokuziphatha esikulindele kwiprogram, kubandakanya imithetho yokukhusela, umthetho, nokuhlonipha kunye nokuquka abanye abantu.
Ukuba umntu omncinci okanye ngokuqhubekayo aphula umthetho wokuziphatha, abasebenzi baya kuhlola imeko kwaye bathathe isigqibo malunga nesenzo esifanelekileyo. Kwezinye iimeko, sinokubuza umntu omncinane ukuba ashiye inkqubo.
Ukhuseleko kunye nenhlalakahle yabathathi-nxaxheba luphambili. I-NCS ihanjiswa ngaphesheya kweNgilani naseNyakatho ye-Ireland ngokuthungelwano kwamava olutsha kunye nemibutho yoluntu kuquka iinkxaso, i-consortia yekholeji, umsebenzi wokuzithandela, uluntu, ishishini loluntu (VCSE) kunye namashishini abucala. Abasebenzi be-NCS bahlolwe i-DBS (ngaphambili i-CRB) kwaye banokuqeqeshwa okufanelekileyo ukusebenzisana nabantu abatsha.
Yonke imisebenzi iyahlolwa ngokukhawuleza ingozi kwaye ilawulwa ngabaqeqeshi nabaqeqeshi abaqeqeshwe ngokucopheleleyo kwaye inkqubo iyafaneleka ekuhlaleni nakwilizwe.
Ngaba kuya kuthatha inxaxheba kwi-NCS ukuphazamisa izifundo zam esikolweni?
Inombolo yeHlabathi yeNtshona Koloni iqhutywa kwieholide zasehlotyeni. Iiprogram zethu ezincinci zekwindla kunye nezentwasahlobo zinokuthi zenzeke naliphi na indawo ngexesha lekwindla okanye entwasahlobo yeeholide zeeholide.
Inkqubo yehlobo yeNCS iqhutywa kwiholide zasehlotyeni. Iiprogram zethu ezincinci zekwindla kunye nezentwasahlobo zinokuthi zenzeke naliphi na indawo ngexesha lekwindla okanye entwasahlobo yeeholide zeeholide.
Ingane yakho ingabhalisa umdla wabo ukuthatha inxaxheba ngokusebenzisa iphepha lokubhalisa kwiwebhsayithi yethu okanye ngokubiza 0114 2999 210 okanye ngokuthumela i-imeyile yethu NCS, uRichard ku-richard.r@element.li
Xa ubhaliso lugqityiwe, siya kukuthumela ezinye iinkcukacha malunga neprojekti ethile ababhalisele yona.